အဘယ်ကြောင့်ရွေ့လျား parts နှင့် functions များသည်မည်သည့် LEGO set တွင်မဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
26 / 03 / 2021 27 / 03 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 814 Views စာ0မှတ်ချက် 10251 အုတ်ဘဏ်, ၁၀၂၆၁ Roller Coaster, 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏, 10275 Elf ကလပ်အိမ်, 6755 ရဲအရာရှိရဲ့ Lock ကို -Up, ၇၀၆၀၇ NINJAGO City, ၇၀၆၀၇ NINJAGO City သငေ်္ဘာကျင်း, 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်!, 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ်, 759684Privet Drive ကို, 76052 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batcave, ကြောကျတိုငျ, Disney, မင်းသမီး Emma Kennedy, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ninjago, Ninjago, Nintendo, နည်းပညာ
စာရေးသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ၊ Lego ချစ်သူမင်းသမီး Emma Kennedy p ရွေ့လျားခြင်း၌ပျော်မွေ့သည်arts ကိုအတွက် Lego ထံမှ, အစုံ Ninjago CityElf Club House ၏ waffle dispenser သို့ငွေပေးချေသည့်စနစ်။
အသစ်စက်စက်သည့်အချိန်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကြောင်းများစွာရှိပါသည် Lego သတ်မှတ်မြေများ - အဘယ်အပိုင်းများလာမည်၊ သင်တစ်ခါမျှမတွေ့ခဲ့ဖူးသောအပိုင်းအစများ၊ သင်နှစ်သက်သောအုတ်ခဲများရှိခြင်း၊ အလင်းသို့မဟုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆောက်လုပ်ရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုရှိသေးသလော။ (တစ်ခါတလေဒီဟာကလျှို့ဝှက်အတွင်းပိုင်းစိန်ခေါ်မှုလို့ထင်တယ် Lego ဒီဇိုင်နာများ။ ) ၎င်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ သို့သော်အသန့်ရှင်းဆုံးသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများအားလုံးကိုသန့်ရှင်းသောမြက်ခင်းပြင်အတွက်သိုထားရမည် Lego အစုံ: ဘုန်းကြီးသောရွေ့လျား part.
ငါဒီမှာပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ နည်းပညာ အစုံ။ ငါသိတယ်။ ငါသိတယ်။ သင်တို့တွင်အချို့သောသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဝံပုလံ (သို့) မုန့်တီနှင့်မုန့်ကိုမရူးပါ။ Lego အားလုံးသောမော်တော်ယာဉ်များငါ့ကိုနည်းနည်း ... အအေးထားခဲ့ပါ။
ခြွင်းချက်များရှိပါသည်။ VW Campervan သည်အလွန်လှပသောအလှတရားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏ စူပါအထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ် Disney ရထားငါကပျော်မွေ့ဘယ်လောက်နှင့်ငါ့ကိုအံ့အားသင့် ၁၀၂၆၁ Roller Coaster - တည်ဆောက်မှု၏ထပ်ခါတလဲလဲရှိနေသော်လည်း - အဆုံးမှာခမ်းနားခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော့်အိတ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူး။
ငါပြောနေတာကတော့မမျှော်လင့်သောရွေ့လျားနေသော partwhimsy ၏တောင်သို့တက်နှင့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအခိုင်အမာစိုက်သော s ။ ဒီတော့ဒီတစ်ပတ်ငါ p ရွေ့လျားနေတယ်artငါ့ကိုရယ်မောအောင်လုပ်ပေးတာ (ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာကစီးဆင်းနေတဲ့ခွက်ပဲ) နှစ်ခုစလုံးကိုလုပ်တယ်။
10275 Elf Club House ရှိ waffle dispenser
မီးခိုးခေါင်းတိုင်ထဲတွင်ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းသည်သင်အား ၀ ံပုလွေတစ်ကောင်အားစောင့်ဆိုင်းနေသောဒန်ထဲသို့တွန်းပို့နိုင်သည်။ ဒီအစုမှာသူတို့အားပြောင်ပြောင်တင်းတင်းသော elves များနှင့် 'em' များသို့ပြိုကျရန်သုံးပုံတစ်ပုံပြိုကျသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ထံမှကြီးမားသောလက်မကိုရရှိစေသော waffler dropper ဖြစ်သည်။
70620 NINJAGO အတွက်ကဏန်းမီးဖို City
ဒါဟာအကြီးမြတ်ဆုံးရွေ့လျား p ဖြစ်ပါတယ်art မည်သည့်အတွက် Lego set နှင့်ငါဒီအပေါ်အဘယ်သူမျှမအငြင်းပွားမှုများကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်။ သင်ရုံကလက်ခံဖို့ရှိသည်တာပေါ့။ အဆိုးဝါးဆုံးသောကဏန်းစားဖိုမှူးသည်မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ၊ အိမ်သာများအောက်ရှိနှုတ်ခမ်းမွှေးများကိုချန်ထားသော်လည်း၎င်းသည်ဖြူဖပ်ဖြူရောဂဏန်းတစ်ခုကိုယူကာ၎င်းကိုချစ်စရာကောင်းသောအနီရောင်ချက်ပြုတ်ထားသည့်အရာအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းသည်အဆိုးဆုံးမဟုတ်သောသူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။Lego ပန်ကာက“ oooooh” ဆူညံသံများ။
70620 NINJAGO ရှိဆူရှီဘား City
ဆိုလိုတာက natch ဟာအဲဒါကကောင်းကင်အတွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဆူရှီဘားပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကဘာလဲ?
အတွက်ငွေသားအချက် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City
ဒါကတတိယမြောက်ရွေ့လျား p ပဲart အပြင်မှာ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ဒါကငွေသားထုတ်ပေးတယ်။ မျက်စိနှင့် wow အချက်များပေါ်လာဘို့, ဒီတစ်ခုညာဘက်ရှိသေး၏။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းရဲ့ဒေါ်လာ ၁၀၀ ယူမယ် Lego ပိုက်ဆံကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်ုပ်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းမလိုအပ်ပါဘူး။
759684Privet Drive တွင်မီးခိုးခေါင်းတိုင်စနစ်ဖြစ်သည်
10251 Brick Bank တွင်ငွေခဝါချခြင်း
တဆိတ်လောက်? The Lego ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူများကရာဇ ၀ တ်မှုများကိုမော်ဂျူလာအဆောက်အအုံထဲသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းဘာတွေရောက်နေတာလဲ? စုံထောက်၏ရုံးခန်း၏ဘေးတွင်ရိပ်ရသည့်ဆံပင်ကိုဘယ်လောက်အထိမေ့သွားသည်။ ဒီအဆောက်အအုံထဲမှာပုံပြင်များကိုဖန်တီးပေးတဲ့မော်ဂျူလာအဆောက်အအုံရဲ့ဒီဇိုင်နာတွေဟာထူးခြားတဲ့နေရာပဲ။ 10251 မှာအုတ်ဘဏ်ကပန်းခြံထဲကနေရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာဘဏ်ကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေတဲ့အထင်ရှားဆုံးအ ၀ တ်အထည်လည်းရှိရုံသာမကဘဲ၊ သင်ပလပ်စတစ်ကိုခုတ်နိုင်သည် Lego ဖြောင့် Vault သို့ငွေသား။
71374 Nintendo Entertainment System မျက်နှာပြင်
A စူပါမာရီယို မင်းရဲ့မျက်လုံးရှေ့ကရွေ့လျားနေတယ်။ သင်ကမှော်လှည့်ကွက်တစ်ခုကိုကြည့်နေသလိုပါပဲ ဒါဟာလှည့်ကွက်မဟုတ်ပါဘူး၊ အပိုင်းအစတစ်ခုပါ Lego ပါရမီ, ထိုပါပဲ။
ကျွန်တော်ဆက်လုပ်နိူင်သော်လည်း၊ ဓာတ်လှေကားမှကြွေးကြော်သံများကြပါစို့ 10273 သရဲခြောက်တဲ့အိမ်, 70657 ကနေ rotisserie Ninjago City ၆၇၅၅ တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ၆၆၅၅ Sheriff's Lock-Up ရှိကန်ဒေါ်လာ ၇၀၈၄ တွင်ပေါက်ကွဲခဲ့သည့်ထောင်တွင်းနံရံတစ်ခုဖြစ်သော Docks သည် Apocalypseburg သို့ကြိုဆိုသည်။ Batman Classic တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ - ဒစ်ခ်နှင့်ဘရုစ်တို့လျှောကျနေသောတိုင်နှစ်ခုကိုဖော်ပြသော Batcave ။
ရွေ့လျား parts ကိုမဆိုအစုကိုခြီးမွှောသောဝမ်းမြောက်သောစိတ်၏အခဲဖြစ်ကြသည်။ ပို။ ပေးပါ Lego။ ရွေ့ကြကုန်အံ့။
← Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 76383 Hogwarts Moment: Potions အတန်းအစားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အဘယ်အရာကိုနိုင်ဘူး LEGO Group The Suicide Squad နောက်တွဲယာဉ်အသစ်နဲ့အတူလား? →